ကျယ်ပြန့်သောနီကိုတင်းအသုံးပြုခြင်းသမိုင်း (၂၀၁၅) အရကြက်ဥများသည်နီကိုတင်းမှထွက်ခွာသည် - Your Brain On Porn
ကြွက်နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကျယ်ပြန့်သမိုင်း (2015) အောက်ပါမွှေးအကျိုးသည်နီကိုဒင်းနုတ်ထွက်
စှဲလမျးသူ Biol ။ 2015 စက်တင်ဘာ 16 ။ Doi: 10.1111 / adb.12306 ။
Huynh ကို C1, Fam J ကို1, Ahmed က SH2,3, Clemens KJ1.
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကြိုးအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းကင်းမဲ့ရာ enviroments မှာပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်ရရှိနိုင်ပါသည်အခါ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလျော့ကျ-တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကုထုံးအကျိုးအတွက်ကိုညွှန်ပြနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဒါကစိတ်ကူးအထူးသဖြင့်ကြွက်များ၏အများစုအလွယ်တကူကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူကျော်တစ်ဦးအစွမ်းထက် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုသရုပ်ပြမကြာသေးမီ preclinical သက်သေအထောက်အထားအားဖြင့်ကောင်းစွာထောက်ပံ့သည်.
ဤတွင်ကျနော်တို့အတူတူနီကိုတင်း, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအကြားအမြင့်ဆုံးစွဲ liabilities ၏တဦးတည်းရှိသည်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့စစ်မှန်တဲ့ရရှိထားသူရှိမရှိဆန်းစစ်။ ကြွက်အခြားရက် saccharin သို့မဟုတ်နီကိုတင်းအဘို့အသီးခြားစီ-ပြီးမှနှာခေါင်းမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦး discrete-ရုံးတင်စစ်ဆေး, အတင်းအကျပ်-ရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသုံးပြုခြင်း, ကြွက်ထို့နောက်နီကိုတင်းနှင့် saccharin အကြားရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤသည် saccharin အာရုံစူးစိုက်မှု (0.2-0%), အရည်ဆုလာဘ်၏ပျက်ကွက်, နီကိုတင်းအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးကာတိုးချဲ့နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းကိုအောက်ပါအတွက်ကျဆင်းခြင်းပြီးနောက်ရှေးခယျြမှုစမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အားလုံးကြွက်အားလုံးအချိန်များတွင် saccharin များအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ချက်ချင်း preference ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဒါဟာဆုလာဘ်ပြင်းအားအတွက်မူကွဲရှိနေသော်လည်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်နီကိုတင်းသမိုင်းပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသ, ကြွက်နီကိုတင်းကျော်ရေအတှကျနှာခေါင်း-Poke မှပိုမိုနှစ်သက်နှင့်မျှမတို့အရည်ကိုအပ်သောအခါတုံ့ပြန်မှုချန်လှပ်မည်ဟုထက်နီကိုတင်းအဘို့တုံ့ပြန်ပြန်လည်စတင်။
ယေဘုယျအား, ဒီလေ့လာမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူအပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်နီကိုတင်းသည်ယခင်သုတေသနမှကိုတိုးချဲ့။ ကြွက်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာနီကိုတင်းဖြတ်ထားတဲ့နှင့်အတူလွယ်ကူဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လူသား၏လူသိအခက်အခဲနှင့်အတူခြားနားနေသည်။ ဒီသရုပ်ကွာဟမှုကိုရှင်းပြနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအချက်များဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။